Lapho kuqala zesikole ekwindla kuze kufike abazali babo ngokuvamile ehlathini sishaywe umoya. Futhi hhayi nje ukujabulela ezinsukwini zokugcina ezingu efudumele. Isikhathi esining impela, ngenhloso lezi ngezimpelasonto ukuqoqa izinto zemvelo. Phela, izingane zidinga ukwenza leaf herbarium. Ikakhulukazi kuhambisana kahle kule Okthoba, lapho zonke kwamahlamvu uphendulela ezinemibala egqamile phuzi futhi zibe bomvu. ekugcineni "sokuvuna" kahle, ungakwazi ke ukubhekana ne eside kusihlwa nobusika mklamo wakhe. Noma ngisho ukukhiqiza umdwebo noma yezandla ezivela ezitshalweni omisiwe ngezandla zabo.
Iqoqa ukwaziswa okuzocatshangelwa herbarium
Kodwa okokuqala kudingeka ukhethe kwamahlamvu kwesokudla nezimbali zasushivaniya. Uma kungaba umswakama kakhulu, angase embozwe isikhunta noma bola. Ngakho-ke iqabunga herbarium ukulondoloza unomphela ukubukeka lemukelekako, kubalulekile ukwazi imithetho lokuqoqa izinto.
1. "ukuzingela" I-amaqabunga, izimbali okudingeka zithathwe kuphela ngosuku ezomile futhi libalele. Sula izitshalo ezimanzi kukhona ngoyisiwula kusinda kakhulu.
2. Khetha kusukela amahlamvu bawa kudingeka wonke kuphela, nepodporchennye amakhophi. Bafanele ezomile.
3. Ukuletha ngekusasa lophiko herbarium ishiya ikhaya, kungcono ukuthatha ngamafayela nokhunye. Kungcono ukubeka isampula ngalinye kwifolda ehlukile, ungakwazi anezele ngayo inothi mayelana indawo kanye nesikhathi iqoqo.
Ukulungiselela we impahla eqoqwe
Manje, lapho zonke fun ehlathini eqoqwe, kubalulekile ukuze ome futhi esitolo. Kunezindlela eziningana indlela yokwenza iqabunga herbarium. Basuke esetshenzisiwe kuye ngokuthi yiziphi izitshalo baye baqoqa futhi kanjani it kuhlelwe ukuzisebenzisa. Indlela ethandwa kakhulu - is iphele uma ngingaphansi kokucindezeleka. Ishidi ibekwe phakathi ezimbili ezicucwini zamaphepha noma iphepha kufunwe bese afakwe incwadi noma ibhodi encane. Kwemidwebo phezulu amavolumu ambalwa umxhwele kakhulu. Ngemva 2 amaviki, i-herbarium amaqabunga ngezandla zakho ngomumo. Le nqubo okufanelekela kangcono ezomile amaqabunga ekwindla kanye izimbali ezincane.
Indlela sesibili kuhilela omiswe yensimbi. Okokuqala sidinga futhi abeke ishidi lephepha, bese insimbi efudumele ironed kuze ezomile. Kuqhathaniswa icala kuqala, kakhulu isheshisa ukulungiswa, kodwa asifanele izimbali ezibunile namaqabunga mncane. Ngaphandle kwalokho, ngaphansi kwethonya lokushisa high umbala impahla zingase zishintshe.
Enye indlela ikuvumela ukugcina zonke ubuhle izitshalo fresh. Ukuze wenze lokhu, ukuqoqa amahlamvu noma izimbali ezithelo futhi hung endaweni epholile emnyama, "sibheke phansi" kuze ezomile. Ngaleyo ndlela kungashiwo rosebuds, daisy nezinye izimbali nge amahlumela ngesikele sokuthena of izimbali kanye izithelo ezomisiwe.
Lapho wonke amahlamvu nezimbali ome, ungakwazi uqhubekele ukubhaliswa kwabo. Lesi sinyathelo kuzothatha isikhathi esingakanani, mhlawumbe, hhayi ngobusuku obubodwa. Kodwa ke sizokwazi ukujabulela umsebenzi wakhe. Uma herbarium amaqabunga nezimbali asetshenziswa njengesiqondiso umlando wemvelo, ungakwazi unamathisele ngasinye ku Thatha iphe- wakufaka ifayela. Ikhasi ngalinye ezifana ngempela kumele kulekelelwa uqwembe esiyisikhumbuzo ne igama simila, isikhathi kanye nendawo yokuhlangana. It uhlala kuphela ukuqoqa wonke kwifolda-ifolda.
Futhi lezi zitshalo ingasetshenziswa ngokwenza yezandla ezithakazelisayo. Phela, in the aphansi izingane esikoleni bavame abahlanganyela kulo ekilasini zabasebenzi. Singasho ezihlotshiswe kahle imidwebo, imifanekiso ukuze inganekwane, onobuhle elincane amapaki kanye izingadi nokunye. D. Lokhu yokuchitha isizungu kahle ngichachambe iyiphi kusihlwa ebusika.
Ukwaluka - ukunitha izikhwama. I-sleeve ukunitha phezulu. emikhonweni ukukhilosha
Iphethini-umfece elingenamikhono ngezandla zakhe
Amabhokisi Homemade (ngezandla zabo) we ngethephu enamathelayo lace (isithombe)
Imithetho yezemvelo ovamile
Batik Wabasaqalayo: Amathiphu Wabasaqalayo okuyinhloko. Batik izifundo Wabasaqalayo: kanjani ukuze balukhulume kahle inqubo i-batik?
Zokuziphatha inganekwane kusiza ukuphila!
Examination neluhlolo basemtholampilo izingane
Anastasia Kovalchuk: umbhali okudala
Namanabukeni Ingungu: lula futhi izinga
Iningi thinners amaphilisi igazi